Madaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhowaan dalka ka dhacaan | Allshabelle.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhowaan dalka ka dhacaan	Added by wadani on August 18, 2012.Saved under WARAR, WARBIXINO	Madaxweynaha Dowladda KMG ah ee xilligeedu dhammaaday Shariif Sheekh Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhowaan dalka ka dhacaan, doorashooyinkaasi oo lagu dooranayo shaqsiga Madaxweynaha ka noqonaya Dowladda cusub ee Soomaaliya.
Ugu horeyntii waxa uu sheegay Madaxweyne Shariif Shariif natiijada ka soo baxda doorashada dhowaan dalka ka dhaceysa ee lagu dooranayo Madaxweynaha Soomaaliya, isagoona sheegay inuu ku qancayo natiijada ka soo baxda doorashadaasi uuna diyaar u yahay haddii laga guuleysto inuu xilka isaga degayo.
“Waxaan aqbalayaa natiijada ka soo baxda doorashada, haddii la iga guuleystana xilka waan ka degayaa” ayuu yiri Madaxweyne Shariif oo intaasi raaciyay inay jiraan caqabado yar yar oo xilliyada qaarkood ka imaanaya horay u socodka nabadda Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga xulinta Baarlamaanka cusub.
Madaxweynaha Dowladda wakhtigeedu dhammaaday Shariif Sheekh Axmed oo u waramayay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in horay uu u ahaa hoggaamiyihii Midowga maxkamadaha Islaamiga ah ee xilka ka qabtay sanadkii 2009-ka, wuxuuna ku celceliyay inuu xilka Madaxweynaha isaga degayo haddii laga adkaado.
Dhinaca kale Madaxweyne Shariif ayaa ka hadlay warbixinta QM ee ku eedeyneysa madaxda Dowladda inay lunsadeen hantida Qaranka, wuxuuna ku tilmaamay warbixintaasi inay tahay mid been abuur ah oo ay ka dambeeyaan kooxo aan dooneynin inay Soomaaliya ka baxdo marxaladda adag oo ay ku jirto.